खानपानमा विशेष ध्यान दिन चिकित्सकको सुझाव, खानामा सन्तुलन नमिलाउंदा फूड पोइजनिङ हुनसक्ने • ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
प्रकाशित मिति :6October, 2019 12:48 pm
सांस्कृतिक र सामाजिक महत्व बोकेको नेपालीहरुको महान् पर्व बडा दशैं खानपिनको पर्व पनि हो । आफन्तजन र साथीहरूसंगको भेटघाटको अवसरमा खाइने मीठो–मीठो खान्कीले कहिलेकाही रोगको ढोका खोली अस्पताल समेत पुर्याउन सक्छ । दशैंको बेला खाइने खानेकुराले फुड पोईजनिङको संभावना बढाउन सक्ने भएकाले सचेत रहन चिकित्सकले सुझाएका छन् ।
मासुका साथै चाडबाडका बेला खाइने चिल्ला, मसालेदार खानेकुरा, मिठाई, मद्यपान र धूम्रपानले नसर्ने रोगको सम्भावना बढाउन सक्छ । अस्पतालमा पनि चाडपर्वकै बेला बिरामीको संख्या निकै नै बढ्छ । चाडबाडका बेलाको अनियन्त्रित खानपानले खासगरी मुटु, कलेजो, मिर्गाैला, फोक्सोमा समस्या देखिनुका साथै मनोरोग लाग्न सक्ने चिकित्सकको भनाई छ ।
अधिक बोसोयुक्त मासु, मद्यपान र धूम्रपान गर्नु अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन मुटु रोगलाई निम्तो दिनु हो । मुटुमा असर बढ्दै जांदा यसको असर शरीरका अन्य भागमा पनि देखिन्छ । दशैं–तिहारपछि धेरैको शरीरमा युरिक एसिडको मात्रा ३० देखि ४० प्रतिशत बढ्ने गरेको वरिष्ठ चिकित्सक डा. सुन्दरमणी दीक्षित बताउनुहुन्छ ।
अरू बेला थोरै खाए पनि हुने तर चाडबाडमा मन लागे जति खानुपर्छ भन्ने गलत मानसिकताका कारण यो बेला पेटका बिरामी बढ्ने गरेको देखिन्छ । खानामा सन्तुलन नमिलाउंदा फूड पोइजनिङको समस्या हुने वीर अस्पतालका पेट रोग विशेषज्ञ डा. भुपेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।
सन्तुलित खानपानमा संयमता नै समस्याबाट बच्ने एकमात्र उपाय हो । चिकित्सकहरू सन्तुलित भोजनलाई यसको सूत्र मान्छन् । चिल्लो मसेलेदार खानेकाुरा माछा, मासु, मदिरा र ड्राइफूड कम खानु , रातो मासु र मदिरा कम गर्नु नै रोगको प्रवेश रोक्नु हो ।